एक कपि भनेको के हो? उदाहरणका लागि जब तपाईले एक कपि तिर्नु पर्छ - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार खेलहरु कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य भारी खेल घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कल्याण चेकआउट
मुख्य >> कम्पनी >> 'Copyay' भनेको के हो?
'Copyay' भनेको के हो?
स्वास्थ्य सेवा शर्तहरु संग एक जटिल विषय हो कि कहिलेकाँही बिल्कुल बिभिन्न भाषा जस्तो लाग्न सक्छ। ती मध्ये एक सर्त हो copyayment , वा राम्रो रूपमा चिनिन्छ copyay । जब तपाई डाक्टरलाई भेट्न जानु हुन्छ प्रिस्क्रिप्स र स्वास्थ्य सेवाहरु को लागी भुक्तानी एक निश्चित रकम हो। तर स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित धेरै चीजहरू जस्तै, के यो वास्तवमै त्यति सजिलो छ?
एक कपि भनेको के हो?
सबै भन्दा बीमा योजनाहरु को लागी, हरेक चोटि जब तपाई डाक्टरलाई तपाईले घटाउन मिल्ने भेट्नुहुन्छ तपाईले कोपे भनिने सेट रकम तिर्नुहुन्छ। एक कापाएट एक फ्ल्याट-शुल्कको रूपमा काम गर्दछ तपाईंको सामान्य व्यवसायी वा विशेषज्ञले तिनीहरूको सेवाहरू प्रयोगको लागि तपाईंलाई शुल्क दिन्छ। विशिष्ट रकम तपाईंको स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा निर्धारण गर्दछ, त्यसैले ठीक प्रिन्ट पढ्न निश्चित गर्नुहोस्। कम संग योजनाहरु मासिक प्रीमियम उच्च कोपी हुन सक्छ।
के यो एसिटामिनोफेन संग ibuprofen सुरक्षित छ
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि प्रतिलिपिहरू व्यवसायिक, रोजगारदाता, र बजार बीमाको लागि हुन्। मेडिकेयर र मेडिकेड निम्न जानकारी भन्दा फरक नियम र सिफारिशहरू हुनेछ।
प्रतिलिपिहरू तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीसँग लागत साझेदारीको एक रूप हो। तिनीहरू उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक मेडिकल केयर पहुँच गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। कोपेजसँग तपाईंको स्वास्थ्य बीमा लागत संरचनाहरूको अन्य भागहरूसँग केहि जटिल सम्बन्ध हुन सक्छ।
तपाईं पुग्नु अघि वार्षिकघटाउन योग्य Ichजो तपाईको बीमा कम्पनीले तपाईको मेडिकल खर्च पुरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनु अघि तपाईले तिर्नु पर्ने रकम हो - तपाईले कभर प्रक्रिया वा प्रिस्क्रिप्शनको लागि पूरै बिल खसाल्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईं आफ्नो कटौतीयोग्य मा पुगे पछि, तपाईंको सिक्सीरेन्स किक्स्, अर्थ तपाईंको योजना चिकित्सा लागत को एक प्रतिशत प्रतिशत को लागी जिम्मेवार हुन शुरू हुनेछ। यो जहाँ तपाइँको चिकित्सा खर्च कठिन हुन्छ, विशेष गरी जब तपाइँको कोपे तपाईको कटौती योग्यमा गणना गर्दैन, बरु तपाईको वार्षिक तर्फ जान्छ अधिकतम बाहिरको जेब ।
अब, चीजहरू स्पष्ट पार्न मद्दतको लागि यहाँ उदाहरण छ: तपाईं आफ्नो खुट्टा फुटेर फुटेर फुट्नुभयो र सोच्नुहोस्, छोरा, म धेरै भाग्यमानी छु मैले भर्खरै मेरो कटौतीयोग्यसँग भेट गरें, र बीमाले यस यात्रालाई तत्काल हेरचाहमा समेट्ने छ। तर के तपाईंले महसुस गर्नुहुन्न तपाईं आफ्नो प्रतिलिपि र सिक्केन्सरीका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईले डाक्टरको कार्यालय छोड्नु भन्दा पहिले, रिसेप्शनिस्टले तपाईलाई cop २० कापीको अगाडि तिर्न भन्छ। दुई हप्ता पछि, तपाईले अतिरिक्त $ for० को बिल प्राप्त गर्नुभयो your यो तपाईको सिक्शन्स हो, जुन यस उदाहरणमा कुनै पनि मेडिकल बिलको कुल २०% हो (र तपाईको मामलामा यो $ bill०० बिल थियो)। यसैले, यो मोचिएको खुट्टाको लागि, तपाईंले $ १०० तिर्नुभयो। योजनाहरू प्रायः दरहरू सम्झौता गर्दछन्, त्यसैले उनीहरूले तपाईंको प्रदायकलाई सम्झौता दरको एक प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछन् तपाईंले आफ्नो उपयुक्त सिक्युरन्स रकम तिर्नु अघि।
मानिसहरु सोच्न को लागी एक चोटि तिनीहरु का कटौती योग्य को लागी, तिनीहरू मेडिकल बिल मुक्त हुनेछन्। जबकि, बीमाले तपाईको सबै मेडिकल खर्चहरू मात्र कभर गर्दछ जब तपाईले आफ्नो पाकेट भन्दा बढि पाउनु हुन्छ, जुन तपाईको कटौती योग्य, सिक्युरन्स र कोपेज भुक्तान गर्ने संयोजनको साथ मिलिन्छ।
कसरी बीमा बिना जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न
सम्बन्धित: कपि बनाम कटौतीयोग्य बीच के भिन्नता छ?
एक copyay कभर के गर्छ?
एक कोपेले प्राय: कार्यालय भ्रमणहरूमा विभिन्न प्रकारका लागतहरू कभर गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि, मेडिकल सेवाहरू आवश्यक पर्ने कागजातहरू बिमा योजनाहरू बीच भिन्न हुन्छन्। सेवाहरू जसमा सामान्यतया एक कापाई आवश्यक पर्दछ:
प्राथमिक हेरचाह र विशेषज्ञ डाक्टरको भ्रमण
शारीरिक, व्यावसायिक, र भाषण उपचारहरू
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू: अर्थात् औषधि पुनर्वास, मनोचिकित्सा
आपतकालीन कोठा भ्रमणहरू
कोपे मूल्य सामान्यतया सेवाहरू बीच भिन्न हुन्छन् र एक प्राथमिक भ्रमण चिकित्सकको भ्रमण भन्दा एक विशेषज्ञ भ्रमणमा अधिक हुन सक्छ। नेटवर्क को बाहिर प्रदायकहरु लाई पनि सामान्यतया एक उच्च कोपे हुन्छ। यदि तपाइँको कोपाई बोर्ड भर मा उच्च लागत छ, यो तपाइँको कम प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा योजना को कारण हुन सक्छ।
यो पनि याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि किफायती हेरचाह कानून , केहि रोकथाम देखभाल सेवाहरू जस्तै चेकअप, क्यान्सर स्क्रिनि ,्स, वा राम्रो महिला भेटघाटमा उपभोक्ता लागत साझेदारी हुँदैन।
मलाई कसरी थाहा छ यदि मसँग एउटा कपि छ?
धेरै जसो बीमा कम्पनीहरू वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू सेवाको समयमा भुक्तान गर्न प्रतिलिपिहरू चाहिन्छ। प्रायः, कोपे रकम सीधा तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कार्डमा छापिएको हुन्छ। योसँग प्राथमिक सेवा हेरचाह र विशेषज्ञ हेरचाह सेवाहरू जस्ता विभिन्न सेवाहरूको लागि सूचीबद्ध रकमहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईको बीमा योजनामा ​​हेर्नुहोस् सबै कभर गरिएको सेवाहरूको विस्तृत सूची प्राप्त गर्नका लागि एक प्रतिलिपि र प्रत्येकको लागत आवश्यक छ।
केहि बीमा योजनाहरु को कापेई छैन। यस अवस्थामा, यो सायद एक महँगो योजना हो, त्यसैले त्यहाँ सेवाहरूको लागि कुनै प्रतिलिपि नभएसम्म, तपाईं अझै योजना प्रीमियमको साथ अतिरिक्त पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ।
कसरी तपाईंको कोपे कम गर्ने
जेबको खर्चहरू सधैं तपाइँको बैंक खातामा हिट गर्नुपर्दैन। यदि तपाईं स्वास्थ्य बचत खाता (HSA), लचीला बचत खाता (FSA), वा स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति खाता (HRA) मा योगदान गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पूर्व कर कोष तपाइँको प्रतिलिपि कभर गर्न। सबै पछि, यो पैसा हो जुन तपाईंले स्वास्थ्य स्वास्थ्यको लागि पहिल्यै सेट गर्नुभएको छ। जे होस्, तपाईंको प्रतिलिपि कम गर्ने एक मात्र तरिका बीमा योजनाहरू स्विच गरेर हुन्छ, जुन सँधै विकल्प हुँदैन।
के हुन्छ यदि तपाइँ धेरै भिटामिन प्राप्त गर्नुहुन्छ
यद्यपि सिंगलकेयर मद्दतको लागि यहाँ छ । कहिलेकाँही प्रिस्क्रिप्सनको लागि कागजहरू छुट भएको दर भन्दा बढी हुन सक्दछ जुन तपाईं सिंगलकेयर कार्डमा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनको लागि singlecare.com मा खोजी गर्नुहोस् तपाईंको उत्तम मूल्य के हो हेर्नका लागि।
Soylent, खाना वैकल्पिक:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
१० मधुमेहका प्रारम्भिक लक्षणहरू र कहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्न
इरेक्टाइल डिसफंक्शन पिल, ड्रग्स, र औषधिहरूको लागि मार्गनिर्देशन
कसरी ओटीसी औषधि र घरेलू उपचारको साथ रातको खांसी रोक्न
मधुमेह टाइप2को लागी रक्त शर्करा दायरा
किन diflucan काउन्टर मा छैन
कुन जन्म नियन्त्रण गोली मेरो चार्ट को लागी सही छ
तपाइँ एक कान संक्रमण को लागी के गर्न सक्नुहुन्छ
फ्लू इन्क्युबेशन अवधि कति लामो छ?
adderall लागत को 10mg कति हुन्छ